Otu esi etinye ya ma jiri ya | Ota Ward Cultural Promotion Association
Iji jiri akụrụngwa ahụ, achọrọ "Uguisu Net Registration User".Maka nkọwa, lee "Gịnị bụ Uguisu Net?".
Facilitylọ ọrụ ọ bụla na-anabata ngwa ojiji site na lọtrị.Maka ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ohere mgbe lọtrị ahụ, a ga-anabata akwụkwọ izugbe na usoro izizi mbụ.
Thezọ lọtrị / ntinye akwụkwọ dị iche dabere na ụlọ ị na-eji.Maka nkọwa, biko lee okpokoro otu esi eji ụlọ nke ọ bụla.
(* Muroba bụ okwu na-anọchite ụlọ ọ bụla nke ebe nzukọ, bọọlụ baseball, bọọlụ bọọlụ, wdg. Nke ogige mposi.)
Maka ụgwọ ojiji nke ngwa yana ụgwọ ojiji ngwa eji eme ihe, biko lee nchịkọta akụrụngwa / ngwa akụrụngwa nke ụlọ ọ bụla.
Na mgbakwunye, biko kwụọ ụgwọ ojiji nke akụrụngwa n'oge ngwà maka iji yana ụgwọ ojiji ojiji ebe ị na-ejighị ụlọ.
Okwu Ota Ward Plaza
Okwu Ota Ward / Aprico Okwu Mmeghe
Daejeon Bunkanomori Ngalaba Okwu Mmalite
Ọ bụrụ na otu ndị ntorobịa na-azụ ahịa azụmaahịa, otu ndị ntorobịa mmepe, otu ndị ntorobịa, ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ jiri ya, ma ihe omume a bụ maka ọdịmma ọha na eze, a ga-ebelata ma ọ bụ wepụ ego iji ya.
Ọ bụrụ na ịnọghị n'èzí, a ga-akwụ gị ụgwọ ihe mgbakwunye 20% na ụgwọ ụlọ ọrụ ahụ.
(N'ihe banyere ire ahịa, a gaghị akwụ ụgwọ maka iji ya n'èzí)
Mgbe ị na-ere ngwaahịa maka ebumnuche nke uru, a ga-atụkwasị 50% nke isi ihe owuwu.
Oge itinye n'ọrụ
Biko lee ndepụta ọnụahịa nke ụlọ ọrụ ọ bụla maka nhazi oge eji eme ihe.
Oge ojiji gụnyere oge achọrọ maka nkwadebe na nhicha.Ntinye na iwepu akụrụngwa-ihe onyonyo na ihe ndozi nke ndị ọrụ ihe ngosi nka rụrụ ga-emekwa n'oge a na-eji ya.
Biko dị njikere itinye aka na njedebe n'ime oge ojiji.
Ọ bụrụ n ’ibubata nri, ihe ọ drinksụ drinksụ, okooko osisi ọhụrụ, ma ọ bụ akpa si n’èzí, biko webata ma bupu n’ime oge ojiji.
N'okwu ndị na-esonụ, enweghị ike ịnabata ojiji nke akụrụngwa.Na mgbakwunye, ọbụlagodi ma ị kwadoro ya, anyị nwere ike ịkagbu, belata, ma ọ bụ kwụsịtụ ojiji ahụ.
Mgbe enwere ihe ojoo imebi iwu obodo ma obu ezigbo agwa na omenala.
Mgbe enwere nsogbu nke ọdachi na-eme na ihe omume nke na-eji ihe egwu.
Mgbe enwere ihe egwu imebi ma ọ bụ tufuo ngwa ọrụ ma ọ bụ ngwa mgbakwunye.
Mgbe a na-ebufe ma ọ bụ nyefee ikike nke ojiji.
Mgbe amatara na ọ bụ maka ọdịmma nke nzukọ nwere ike ime ihe ike ma ọ bụ mekpa ahụ ahụ.
Mgbe ebumnuche ojiji ma ọ bụ ọnọdụ ojiji mebiri.
Mgbe akụrụngwa adịghịzi adị n'ihi ọdachi ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ.
Mgbe enwere nsogbu njikwa n'ụlọ ọrụ, dịka mgbe ị na-eme mkpọtụ.
* Enweghi ike iji ụgbọ ala na-enye ọkụ n'ihi na mkpọtụ na ikuku na-ekpochapu agbata obi.
Gbanwee na ịkagbu ụbọchị ojiji
Ọ bụrụ na enwere mgbanwe na ụbọchị na oge eji, ụlọ ojiji, wdg, ịnwere ike ịgbanwe usoro ahụ.Biko tinye maka mgbanwe n'ime oge nnabata ngwa akọwapụtara maka ngwa ọ bụla.Biko zere ịgbanwe ọzọ ma ọ bụ kagbuo ojiji ahụ mgbe ị gbanwere ụbọchị ojiji, wdg, n'ihi na ọ nwere ike ịkpata nsogbu ndị ọrụ ndị ọzọ.
* Jiri nkwado, nnata, na akara nke onye chọrọ (a naghị anabata ụdị akara stampụ) maka itinye akwụkwọ.
* A ga-anabatara akwụkwọ naanị ebe ị ga-eji.
Nnukwu ụlọ / nnukwu ọnụ ụlọ / ụlọ ngosi Ofbọchị eji
Ime ụlọ ndị ọzọ
* N’ihe banyere nke 5 nke ụlọ ọrụ egwu, rue elekere 7:XNUMX nke ụbọchị N'ụbọchị
Tupu ojiji oge
Halllọ Nzukọ, ọnụ ụlọ multipurpose, akụkụ ngosi, oghere oghere Ofbọchị eji
* N'ụtụtụ, n'ihe banyere ụdị nke mbụ, ruo ụbọchị tupu ụbọchị eji N'ụbọchị
Ijikwa nke ojiji ụgwọ n'ihi mgbanwe ma ọ bụ kagbuo
Ọbụna ma ọ bụrụ na onye nhazi ahụ kagburu ojiji ahụ n'ihi ọnọdụ nke ya, ego eji akwụ ụgwọ a na-akwụ ụgwọ enweghị ike ịkwụghachi n'ụkpụrụ.Agbanyeghị, ọ bụrụ na achọọ ma kwado ya tupu ụbọchị ojiji ahụ akọwapụtara, a ga-akwụghachi ego eji eji ebe ahụ dị ka ndị a.
* Ọ bụrụ na ndị gbanwere ojiji ego karịa ozugbo ugwo ojiji ego, ị ga-achọ ịkwụ ụgwọ ihe dị iche.
* Ọ bụrụ na ị kagbuo mgbe ị gbanwechara ụbọchị ojiji, nkwụghachi ego nke ihe ewumewu obibi nwere ike ịdị iche.
* Iji weghachite ego eji eme ihe, achọrọ akwụkwọ ozi nnabata, nnata, yana akara aka nke onye ahụ (akara akara stampụ agaghị ekwe omume) chọrọ.
Nkwụghachi zuru ezu
Ime ụlọ nnukwu ime ụlọ
Ruo ụbọchị 90 gara aga Ofbọchị eji
Ruo ụbọchị 60 gara aga Ofbọchị eji
Ruo ụbọchị 30 gara aga
Nnukwu ụlọ nzukọ naanị
Obere nnukwu ụlọ / ụlọ ngosi
Ruo ụbọchị 30 gara aga Ofbọchị eji
Ruo ụbọchị 15 gara aga
Ime ụlọ nzuko, ime ụlọ ndị Japan, ọnụ ụlọ tii, ime ụlọ mmegharị
Gymnasium / art art / music studio
Ruo ụbọchị 7 gara aga Ofbọchị eji
Ruo ụbọchị 2 gara aga
Lọ / / ime ụlọ ọtụtụ
Nzukọ nzuko / ihe omumu ihe
Ime ụlọ ndị Japan na ụlọ nka dị iche iche